Gorfayn iyo Milicsi Buuga Hanqadh
By Ibrahim Aden Shire August 22, 2017
waxaan hadda dhameeyay aqrinta buuga Hanqadh oo dhawaan uu qoray Muxamed-Haykal. Halkaan waxaan idin kula wadaagayaa sidaan u arko buuga.
Buugu waa sheeko faneed xajmigiisu yaryahay. Waxaa dhex taal u ah oo ku saabsanyahay wiil la oran jiray Haybe oo isagoo 8 sano jiro ka ambaday reerkooda. Haybe ma uusan habaabin kaliya ee wuxuu u galay reer ay qoladiisu col xiire-xiire ah yihiin, wixii intaas ka dib dhacay waa sheeko cajiib ah oo aad u baahantahay inaad buuga ka aqriso.
Sheekada buugu xambaarsanyahay waxaad moodaa sheekooyin dhowr ah oo dhab oo hal meel la isugu keenay. Intaan aqrinayay buuga meelo waxaad moodaa inay aniga iga hadlayaan oo waxay si toos u taabanayaan waayo aragnimo isoo martay, qaar waxay la mid yihiin kuwo dad aan aqaan ku dhacay ama aan goob joog ka ahaa, qaar waxay la mid yihiin kuwa la iiga sheekeeyay dad ay qabsadeen sidaa darteed buugu wuxuu dabaqayaa nolosha dhabta ee soomalida maanta.
Intaa oo kali ah maaha. Sidoo kale, buugu wuxuu kulmiyay dhammaan hab-nololeedka Soomaalida miyyi iyo magaalo, dal iyo dibadba. Tusaale, qaybta hore ee buuga wuxuu ku saabsanyahay reero ree miyyi ah taasoo aad ka arki karto sida reer miyigu ugu nool yahay, colaadaha sabab la'aanta ah, harraad iyo gaajo, raffaad iyo dhib-u-joogid. wuxuu ku tusayaa naxariis la'aanta reer miyigu ay ka dhexleen nolosha qalafsan ee ay ku nool yihiin.
Wuxuu sidoo kale ka waramayaa sida caruurta loogu habo nacaybka reeraha ay ood wadaagta yihiin iyadoo looga sheekooyin dagaalo waa hore dhacay, dad la laayay iyo xoolo la qaaday. Caruurta waxaa lagu habaa in reerkoodu aduunku ugu sareeyo, qolo walba oo is qabtaana birta uu ka aslo libintana ka qaato. Sidaas oo tahay dhinaca kale, reerkoodu waa dhibane dadkiisi la gumaaday, hablahoodi la kufsaday xoolahoodina la dhacay. Marki la tabinayo warkaan is khilaafsan ma jirto cid su'aan ka keento oo tiraahdo sidee ayay ku dhacday in reerka aduunka ugu xoog weyn, cid kastana ka adkaatay inuu dhibane noqdo? Arinkaan ayuu buugu inagu tusayaa duuduub u liqida sheekooyinka aan meelna haysan hadana dadka kala geyay ee soomaalida ku badan.
qaybaha danbe ee buugu wuxuu kulmiyay nolosha magaalada. gaar ahaan kuwii danbe ee qaxa iyo qaxootinimada. Wiilki howd ku ambaday iyo qaar ka mid ah reerkooda waxay isu marayaan wadamo badan sida Jabuuti, Kiinya, Itoobiya iyo Ingiriiska. waxay kula kulmayaan waddamadaas kala duwan ee ay tageen dhacdooyin uurkutaallooyin reebay iyo waayo-aragnimo ninkeed anfacda ah.
Buugu wuxuu sidoo kale tusaaleeyay sida soomaalidu marki ay waxoogoo diinta yara barato isugu daydo inay dadka oo dhan dhaqan ahaan carabiyeeyaan, ayna isugu qaldaan diinta islaamka iyo luuqada carabiga. Tusaale, farduus oo ah Haybe walaashii oo xilli danbe miyyi laga keenay goorti malcamad la geeyay ee ay Qur'aanka wax ka baratay carabiyaduna u kacday waxay bilowday inay raacraacdo magacyada dadka ay taqaanay.
Magac walba icraab iyo bushi ayay ku qabatay. waxaa usoo baxay magacyo badan oo carabi ahaa oo soomaalidu laxniyeen, markaas ayay bilwoday inay saxdo dadkana ku tiraahdo mgacu sidaan mahee sidaan ayuu sax ku yahay. Tusaale, iyadu waxay keedi u badashay Firdoosa, eedadeed oo Cibaado la oran jiray waxay ku tiri magacaadu waa 'Cibaadah' sidoo kale aayadeed oo Yusur la oran jirayna waxay ku tiri magacaadu waa 'Yusrah'. kuwa badan oo ay magacyadoodu carabi noqon waayeen sida aabaheed la oran jiray Hurre Maydal iyo hooaydeed oo magaceedu ahaa Ugaaso, waxay ku fakartay inay kaba badasho magacayada
Buugu wuxuu tusaalaynayaa in noloshu Soomaalidu tahay mid murugsan (complex) il-roorkeeduna aan la hayn meesha uu ka bilowday. Dadku wuxuu wadaagaa deegaan, dhalasho iyo xididdinimo. sidaa darteed ma kala maarmo mana kala miirmi karo. Yusur waxaa qabo reer Duullane oo ah beesha uu Haybe ka dhashay balse waxay u dhalatay beesha reer Dayax-weerar oo ah beesha ay cadaawada qarni jirsatay kala dhaxayso reer Duullane.
Inkastoo beelaha cadaawad ka dhaxayso la isuguna sheekooyo inaysan naxariis iyo is-bixin ka dhaxayn, hadana dadku wuxuu isu dhex-yaal qaar xun iyo qaar wanaagsan. tusaale, oday Deyr iyo suldaan Sarreeye waa isku beel hasa yeeshee midna nolosha Haybe ayuu quus geeyay midna qiimaheeda kor geeyay. sidaa darteed buugu wuxuu ina barayaa in aan shaqsina loo colaadin beesha uu ka dhashay ee lagula dhaqmo dabcigiisa iyo dadnimadiisa.
Si kooban buugu waa mid xiiso badan. waa macaan iyo qaraar isku dhafan. Mar waa uu kaa oohinsiin oo sheeko tiiranyo iyo murugo badan ayuu ku taabsiin, marna waa uu kaa qoslin oo sheeko madadaalo iyo macaan leh ayuu kula wadaagi, mar waa rajo iyo mustaqbal ifayo marna murugo iyo quus aduun. Hasa ahaatee, wuxuu ku khatimayaa rajo tilmaamayso inaysan soomaali kala tagin, kala go'in kala maarmin, mugdi kasta iyo mad-madow soo kala dhex galayba wali kala guursato isna caawiso.